Momba anay - MRS security technology Co., Ltd.
Lockout Valve vavahady
Kitapo fanamoriana faribolana kely
Fanidiana herinaratra sy pnemika
Kitiho ny bokotra & Switch Lockouts
Fanidiana hidy pnemika
MRS security technology Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina manokana amin'ny famokarana karazana vokatra LO / TO. Niorina tamin'ny famokarana vokatra fanalahidy fanidiana lockout tokony hialana amin'ny lozam-pifamoivoizana isika, izay ateraky ny angovo tsy ampoizina na fananganana milina sy fitaovana amin'ny alàlan'ny famoahana angovo tsy voafehy. Nandritra ny taona maro nivoarana haingana, MRS dia lasa iray amin'ireo mpanamboatra voalohany amin'ny fitaovana Lockout / Tagout any Shina.
Ny orinasanay dia efa nanomboka nanaiky ny fepetra takiana amin'ny mpanjifa
Manolotra fantsom-pifandraisana sy fanamoriana marobe izay manarona ny ankamaroan'ny rindrambaiko mekanika sy elektrika isika, ao anatin'izany ny kitapo fiarovana, fanidiana valizy, valizy fanidiana, fanidiana herinaratra, fanidiana tariby, kitapo ary gara sns
Ny vokatray rehetra dia amboarina araka ny fenitra CE, OSHA, CA Prop65. Nihaona tamin'ny fitakian'ny tsena dia efa nanomboka nanaiky ny fepetra takian'ny mpanjifa ny orinasanay. Ny iray amin'ireo fahamboniana amin'ny fisafidianana ny vokatray dia serivisy avo lenta aorian'ny varotra.
Roa ambin'ny folo volana amin'ny vanim-potoana fiantohana dia azo antoka hamela anao hahazo toky mividy ny vokatray. Manana ny ekipa mpikaroka sy fampandrosoana koa izahay mba hamoaka karazana vokatra sy vahaolana vahaolana fiarovana mba hahatratrarana ny takian'ny mpanjifa atokana.
MRS— ”Lockout ho an'ny ainao, tagout ho fiarovana anao”.
Ny famokarana fiarovana no antoky ny asa salama sy ny fiainana salama ho an'ny mpiasa. Ho an'ny orinasa, io no fototra hahatrarana tombony ara-toekarena sy fampandrosoana maharitra. Eo ambanin'ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny mordern, dia lozam-pifamoivoizana an'arivony maro no miteraka herinaratra sy fitaovana tsy voarindra na tsy nampoizina.
Ny fenitra OSHA, navoakan'ny fitantanana ny fiarovana sy ny fahasalamana ara-pahasalamana, dia heverina ho fiarovana amin'ny asa lehibe sy manana fahefana indrindra fenitra. Ny fenitra OSHA dia misy atiny feno kolontsaina fiarovana sy fahasalamana, filozofia fitantanana fiarovana azo antoka ary rafitra fitantanana fiarovana ara-tsiansa, izay ekena sy ankafizina erak'izao tontolo izao.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny fotoana sy ny fitomboan'ny fitakian'ny tsena, tsy ny olona ihany no tokony hampiakatra ny fahatsiarovany ny fiarovana azy ireo, fa ny fahatokisan-tena amin'ny fiarovana ny fitaovana ilaina koa. Noho izany, niseho tamin'ny fotoana mety ny MRS.
MRS security technology Co., Ltd. dia orinasa maoderina manambatra ny R&D, ny famokarana ary ny serivisy. Manana ekipa fitantanana kilasy voalohany izahay ary manana zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina mahaleo tena. Miaraka amin'ny fomba fijery matihanina, fihetsika mitandrina sy angon-drakitra siantifika, MRS dia manome vahaolana fiarovana ho an'ny mpanjifa amin'ny famokarana milina, sakafo, fananganana, lozisialy, indostrian'ny simika, angovo ary sehatra hafa. Manarona fonosana fiarovana marobe isan-karazany isika, ao anatin'izany ny kitapo fiarovana, fanidiana valizy, valizy fanidiana, fanidiana herinaratra, fanidiana tariby, boaty fanidiana vondrona, kitapo ary gara sns. Ny vokatray dia amidy ampitan-dranomasina ary eken'ny tsena manerantany tanteraka.
Ny MRS dia manaraka hatrany ny filozofia iray izay tsy maintsy hidina ny angovo mampidi-doza tsirairay. Izahay dia mampiroborobo ny "Fomba ifantohan'ny olombelona, ​​ny fiarovana aloha". Ny tsirairay amintsika dia tokony hanatsara ny fahatsiarovan-tena momba ny fiarovana. "Lockout ho an'ny ainao, tagout ho fiarovana anao" no teny filamatray hiarovana ny foto-kevitry ny fiarovana. Ny fiarovana ny ain'ny mpiasa rehetra manerantany dia misy kalitao sinoa no tadiavinay tsy misy tohiny.
Ny fikatsahantsika fanavaozana dia tsy nitsahatra ary mandroso haingana eny an-dàlana.
Araka ny fantatsika rehetra, ny fanavaozana dia fanahin'ny fahaveloman'ny orinasa sy ny fampandrosoana azy. Ny fanavaozana dia tsy misy ihany ny fanavaozana ny vokatra, ny fanavaozana ny teknolojia ary ny fanavaozana ny andrim-panjakana, fa ny fanavaozana ideolojia an'ny orinasa. Ny fiarahamonina ankehitriny dia mandroso hatrany. Vokatr'izany dia mila manavao ny orinasa ary mila manavao, raha tsy izany dia hofongan'ny The Times izy ireo.
Ho fitsinjovana ny orinasa, MRS dia tsy nanakana ny vokatra vaovao novolavolain'ny ekipa fikarohana sy fampandrosoana ho anay. Miaraka amina endrika vaovao misy patanty marobe, lasa orinasa mpamorona i MRS. Ny fanavaozana ny andrim-panjakana an'ny orinasanay dia nihatsara. Ny fivoriana sy ny lahateny dia nanentana ny fahaterahan'ny rafitra vaovao sy ny fanatsarana ny andrim-panjakana taloha. Ho fanampin'ireto roa ireto, ny fanavaozana ideolojia, raha ny marina, dia fototry ny kolontsain'ny orinasa. Miaraka amin'ny tanjona hialana amin'ny boro sy hamoahana ny vaovao, ny MRS dia manohy manova ny teoria mifanaraka amin'ny olana azo ampiharina.
zava-baovao, RTOA efa an-dàlana.
IANAO VE RTOA
© Copyright -2021 - 2023 Fanohanana ara-teknika: